Mpivarotra avy amin'ny firenena 100 mahery
Miantsena azo antoka misaotra an'i
Famantaranandro an'arivony no amidy manerantany
Topimaso momba ny fizotry ny fividianana
Ny torolàlana feno ho anao amin'ny fifanakalozana mahomby sy mahomby.
Ireo manampahaizana manokana momba anay dia manamarina
ny fividiananao, hahafahanao miantsena
amin'ny fahatokisana tanteraka. Hamantatra bebe kokoa
Topimaso amin'ny fandefasana
Ny fotoana sy ny daty fandefasana sy ny fandefasana dia mety miovaova arakaraka ny fisian'ny entana sy ny toerana misy azy. Ny daty fanaterana tombanana dia mety misy amin'ny pejy lisitry ny vokatra alohan'ny hanampiana ny entanao amin'ny sarety.
Ny fandefasana eo an-toerana
Raha toa ka azo alefa eo an-toerana ilay entana izay vidiana dia hanana safidy ianao hisafidy fanaterana eo an-toerana amin'ny fizahana. Ny fandefasana eo an-toerana dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny faritra Greater Los Angeles izao.
Raha toa ka ekena ny entana hovidiana eo an-toerana dia afaka misafidy ianao fakana eo an-toerana amin'ny fizahana. Vantany vao vonona ny kaomandy, dia hifandray aminao izahay handamina ny daty sy ny ora fakana anao.
Fomba fanodinana tsotra
Antoka 100-vola azo antoka
Ianao dia afaka manomboka fiverenana na mangataka famerenam-bola amin'ny fotoana rehetra mandritra ny fanodinam-bolanao raha tsy nomena anao ny mombamomba ny fanarahana na ny porofon'ny fitaterana.
Raha nofoanana ny kaomandinao, na tsy azo tanterahina, dia haverina eo no ho eo ny famerenam-bola amin'ny endrika fandoavam-bola. Ny torolàlana momba ny famerenam-bola dia alefa amin'ny alàlan'ny mailaka.
Refunds & bola
Ny fandoavam-bola dia voahodina ao anatin'ny 24-48 ora avy amin'ny Watch Rapport. Ny kaonty kaonty arakaraka ny andrim-bolanao dia mety haharitra hatramin'ny 10 andro fiasana tsy tafiditra amin'ny faran'ny herinandro na fialantsasatry ny banky.